ဖောင်ကြီး သင်တန်း လုံးဝ ဖျက်သိမ်းသင့်ဟု ပညာရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ဆရာတချို့ဝေဖန်
ပို့စ်တင်ချိန် - 12/11/2013 05:11:00 PM
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ။ ။ နှစ်ပေါင်း ၅ဝခန့်ပင် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် စစ်အာဏာရှင်များ၏ မူဝါဒများကို ရိုက်သွင်းပေးသော ဗဟိုဝန် ထမ်းတက္ကသိုလ် (ဖောင်ကြီးသင် တန်း)အား လုံးဝဖျက်သိမ်းသင့် နေပြီဟု ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်း မှ ဆရာတချို့က ဝေဖန်ပြော ကြားလိုက်သည်။
လက်ရှိဗဟိုဝန်ထမ်းတက္က သိုလ်၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများမှာ ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါနှင့် ညီ ညွတ်မှုမရှိတော့သဖြင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်လျက် ရှိသော် လည်း ယင်းတက္ကသိုလ်ကို တက် ရောက်ဖူးသည့် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှဆရာများကမူ ယင်းသို့ပြန် လည်ပြုပြင်မည့်အစား လုံးဝဖျက် သိမ်းသင့်ကြောင်း၊ ယင်းတက္ကသိုလ် မှာ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေများ အလဟဿဖြစ်နေသည့်နေရာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီသင်တန်းက သူတို့ ကောင်းကြောင်းတွေပဲ ပြောတဲ့ နေရာပါ။ ဆရာ တက်တုန်းက တော့ စိတ်မဝင်စားလို့ သင်နေရင် အပြင်ပဲထွက်နေတာ။ သင်ရိုးတွေ ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လဲ နောင် တက်လာမယ့်အ စိုးရတွေ ကောင်း ကြောင်းတွေ ပဲပါနေဦးမှာ။ တကယ် တမ်းက အဲ့ဒီလို သင်တန်းတွေအ စား ဆရာတွေအတွက် လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးတည့်တဲ့သင် တန်းတွေစီစဉ်ပေးရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ အဲ့ဒီသင်တန်းတက်ရင် တစ်လဆိုရင် အနည်းဆုံး ငွေတစ် သိန်းကတော့ ကုန်ပြီးသားပဲ။ အဲ့ ဒီနေရာက ဝန်ထမ်းအကျိုးဖြစ် ထွန်းတာထက် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာဆုံး ရှုံးတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်''ဟု အ ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာန မှ ဆရာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမည် ဆိုပါက လက်ရှိ ယင်းတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားပေး နေသည့်သူများ၏ ဆန္ဒသဘော ထားများကိုပါ အကြံဉာဏ်ရယူ သင့်ကြောင်း၊ တက်ရောက် ရမည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ ၏ သင်ယူလိုသည့် အကြောင်း အရာများကို ထည့်သွင်းပေးစေ ချင်ကြောင်း တက္ကသိုလ်ဆရာ တချို့က ဆိုသည်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်း ပညာဌာနမှ လက်ထောက်ကထိက တစ်ဦးက ''ပြင်မယ်ဆိုရင် တကယ် လုပ်နေတဲ့သူတွေ မေးဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်နေတာ က အစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ကိုရောထား တာပဲ။ ကျောင်းဆရာ နဲ့ ဆရာဝန်ဆိုတာက အစိုးရဝန် ထမ်းမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပါ။ ပြည်သူစာမတတ်ရင် ကျွန်တော် တို့ တာဝန်၊ ပြည်သူ မကျန်းမာ ရင် ဆရာဝန်တာဝန်ပဲ။ ဘယ်သူ တွေရဲ့ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမခံစေ ရဘူး။ ဒီအတွက် ဖောင်ကြီးသင် တန်းဆိုတာမျိုးလဲ မလိုအပ် ဘူး။ ပြည် သူတွေ အတွက် ကောင်းကျိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင် ရည် မြှင့်တင်ပေးတဲ့ သင်တန်းမျိုးတွေပဲ လိုအပ်တယ်။ အခုက ဖောင်ကြီး မတက်ရင် ဝန် ထမ်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ကြီးကရှိနေတယ်။ မတက်ချင်လဲ တက်ကြရတာပဲ''ဟုပြောသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၄၀ ကျော် လွှတ်ပေး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင်ကို ကြ...
လုပ်ပွဲ ဖန်တီးသည်ဟု ထိုင်းလက်ဝှေ့အဖွဲ့ စွပ်စွဲထား
အမျိုးသမီးသုံးဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့သည့် ယာဉ်တု...
နိုင်ငံခြားအရက်များ မြေလျှိုးပြီး ဈေးနှုန်းက မိုးပျံ
ဆောင်းရာသီ တွင် အသားအရေ လှပ စိုပြေစေရန်
ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol4No 170
သင် ရေးခြစ် သည့် ပုံက ပြောပြ နေသော သင့် အကြောင်း
ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ် (12-Dec-2013)
မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ် (8-Dec-2013)
အိုဘားမားတို့ နယ်ဆင်မန်ဒလဲလား အသုဘမှာ Selfie အလှဓာ...
မြန်မာကနူး လှေလှော်အဖွဲ့ ရွှေသုံးခုနှင့် ကြေးတစ်ခု ...
Mizzima Newspaper Vol.2 No.44.
မျက်နှာမှာ အလံပုံစံငယ် ဆေးခြယ်အားပေးမှု ခေတ်စားလာ
New light of Myanmar သတင်းစာ 11.12.2013
ကြေးမုံ သတင်းစာ 11.12.2013
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ 11.12.2013
တခြားနိုင်ငံများတွင် မလုပ်သင့်သော ရိုင်းရာကျသည့် အ...
ငါး ဦးလျှင် လေးဦး က လက်မထပ် ခင် လိင် ကိစ္စ အတွေ့ ...
မောင်တောနယ်စပ် ညမထွက်ရအမိန့် (၁၀) ကြိမ်မြောက် ဆက်လ...
ဘိန်းနှင့် စိတ်ကြွဆေးဖြတ်လိုက အရေးယူခြင်း မခံရအောင...
B.Tech သင်တန်း ရပ်နားရန် ပညာရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ ဆွေး...
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ချိုးနှိမ်ရန် သံခြေချင်းများကို အသုံး...
အသက်ဘယ်လောက် ရှည်မလဲဆိုတာ အရေပြားက ပြောလိမ့်မယ်
မြိတ်မြို့တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
တရားလိုကနေ တရားခံ ပြန်ဖြစ်တဲ့ သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်ြးေ...
ဖောင်ကြီး သင်တန်း လုံးဝ ဖျက်သိမ်းသင့်ဟု ပညာရေးအသို...
အာ​ဏာ​ရှင်​စ​နစ်​ကြောင့် ​မြန်​မာ့​ကျန်း​မာ​ရေး ​အ...
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ တာဝန်မကျေသေးပါ
ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့ထုတ် Net Guid Journal Vol. 3, N...
မွတ်ဆလင်အများကို ၃ မျိုး ၃ စား ခွဲထုတ်လိုက်သော အော...
ကျောင်းသားလေးယောက် ပျောက်လို့ရှာ တရားခံက ဆီးဂိမ်းဖြစ်
စင်္ကာပူ ဆူပူအကြမ်းဖက်မူ အိန္ဒိယ အလုပ်သမား ၂၄ ဦး တရာ...
လည်ပင်းကြေးကွင်းဝတ် ကယန်းတိုင်းရင်းသားများ နေရပ်တွ...
အကျဉ်းသား ၄၄ဦးယနေ့လွှတ်မည်၊ ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မ ၅၀၅ ဖြ...
ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း “မမကြီး” အနှိပ်ခန်း ရဲဝင်ဖမ်း
အာရုံကြောဆေးအစား ပိုလိုဆေးမှားသောက်သူ မိန်းကလေးသေဆုံး
ဦးဝင်းချို နှင့် အပေါင်းအပါ (၆)ဦးထဲမှ (၅)ဦး ကျင...
ရွှေတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၈ ဦး ...
ရန်ကုန်တွင် လူသေမှု ဒုတိယအများဆုံး မီးလောင်မှုကြီး
ဥပဒေ အတည်မဖြစ်သော်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဒေ...
အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ဘုရားရှိခိုးတဲ့ ဒေါ်နော်အုန်းလှ တရား...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ လိင်ဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်တဲ့ Bri...
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အိမ်သာတွင် spuer glue (ဆင်ကော်)...
အဲဒီကျောင်းကြီးကို ပြပြပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေတဲ့..
မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလား ဆွေးနွေး အကျဉ်းသား ဖလှယ်
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ရုံး မှ သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျေ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများက တိုင်းပြည်ကို တည...
အနောက်နိုင်ငံများက ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု...
ရဲစခန်း သွားတိုင်ကြားသူကို ပါးရိုက်လွှတ်တဲ့ ပလိပ်မြ...
Samsung က ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဖုန်းရောင်းချမူအရေအတွက်ေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကာတာ ကျန်းမာရေးညီလာခံ တက်ရောက် ...
သီလရှင်တစ်ပါးကို ဓါးထောက်ခြိမ်းချောက်၍ လူနှစ်ဦးတိ...
ရာသီဥတု ဒဏ်ကြောင့် ခြောက်ကပ်ပြီး ခြေဖ၀ါး ကွဲနေသူမျ...
အမျိုးသမီးအတွက် နေ့စဉ် စားသုံး ပေးသင့်သော အစားအစာ ...
အလုပ်စွဲရောဂါ(Workaholism ) ဆိုတာ
လူကို ဓါတ်ပုံရိုက်သည့် အခါ သိထားသင့်သည့် ဆောင်ရန်၊...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြမှု အခြေအနေကြောင့် ထိုင်းရုပ...
၂ဝ၁၄မှာ သီချင်းခွေ စီစဉ်တော့မယ့် ခင်ဇာခြည်ကျော်
သံလိုက်က အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများအား ကူညီဖြေရှင...
ခုတ်မောင်းလာသော မီးရထားကို ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကား ဝင်...
အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားမှုကို Online S...